स्थानिय Archives - Sawal Nepal
झापामा थपियाे निषेधाज्ञा, अब घर बाहिर निस्कन नपाईने
डीसीसीएमसी झापाले निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । संक्रमण बढिरहेको हुँदा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय भएको हो । डीसीसीएमसीले औषधि खरिद तथा उपचार बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने निर्णय गरेको झापाका प्रहरी उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले जानकारी दिए । यस्तै, हाट बजार मेला, जात्रा महोत्सव, पार्टी ,भोज, लगायत
केरखाको आर्मी क्याम्प आगाडी हात्तीले कुल्चिएर एक व्यक्तिको मृत्यु
कमल गाउपालिका वार्ड न. ३ सहिदगेट निवासी ४५ बर्षिया जितबहादु खोयंग लाइ हात्ती ले केरखा आर्मी क्याम्प आगाडी कुल्चिए पछि वहा को मृतु भएको हो |
अब जेठ १ गतेदेखि झापामा कठोरताका साथ थप कडा निषेधाज्ञा !
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले अब कठोरतापुर्वक थप कडा निषेधाज्ञा आवश्यक भएको देखिएको बताएकाछन् । जिल्ला समन्वय समिति झापाले जुम मार्फत आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएकाहुन् । बैशाख मसान्तसम्म यसभन्दा अघि निषेधाज्ञा जारी भएको छ । पूर्ण निषेधाज्ञा भनिएपनि पुर्ण रुपमा निषेधाज्ञा पालना नभएका कारण अब कठोर हुनु पर्ने अवस्था आएको तिम्सिनाको भनाई
कोरोना कहरले कपिलवस्तुलाई पनि कन्तविजोग बनाएको छ । संक्रमितले उपचार पाउन सकस भएको छ । अक्सिजन नपाएर बिरामी अत्तालिएका छन् । अस्पतालमा संक्रमितले बेड पाउन नसक्दा भुइँमा पिफर्म राखेर बस्नुपरेको छ । जिल्लाभरको स्वास्थ्य सेवाले थेग्न नसकेर बेहाल भएका बेला कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकालाई भने अनौठो रहर जागेको छ । कोरोनाले आक्रान्त बनाएका बेला नियन्त्रणमा जोड
तातोपानीमा मह र कागती मिसाएर खाँदाको फाइदाहरु
१. पाचन सुधार्छ पाचनलाई सुधार्नका लागि बिहान तातो पानीमा मह र कागती मिसाएर खानुपर्छ । यसले पेट सफा राख्न मद्दत गर्नुका साथै कलेजोमा रसको उत्पादनलाई बढाउँछ, जसबाट पाचन प्रक्रियामा मद्दत मिल्छ । कागतीमा रहेको एसिडले पाचन प्रणालीलाई मजबूत पार्न मद्दत गर्छ र अवाञ्छित विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्छ । यसका अलावा महले एक एन्टीब्याक्टेरियलको रुपमा काम
लायन्स क्लब अफ दमक ग्रिन सिटीको अध्यक्षमा सुनिल शाह चयन
लायन्स क्लब अफ दमक ग्रिन सिटीको अध्यक्षमा लायन सुनिल शाह चयन भएका छन् । भर्चुअल माध्यमबाट भएको साधारणसभाबाट शाह अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । यस्तै प्रथम, द्धीतीय र तृतीय उपाध्यक्षमा क्रमश तारकेश्वर यादव, डा. गुरुप्रसाद मैनाली र राकेश शाह चयन भएका छन् । सचिवमा पेमा योञ्जन र कोषाध्यक्षमा नबनित झा चयन भएका छन् भने क्लबको
जोखिमपूर्ण बन्दै स्थानीय तहका का आइसोलेसन : न पर्याप्त अक्सिजन न त चिकित्सक!
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २५ शय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। तर, अस्पतालमा न चिकित्सक छन् न त पर्याप्त अक्सिजन नै। ‘हामीसँग डाक्टर छैनन् तर प्रदेश अस्पतालका डाक्टरसँग समन्वय गरेर सेवा दिन्छौँ,’ नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘संक्रमितको उपचारमा नगर स्वास्थ्य शाखाका कार्मचारीहरू खटाउँछौँ।’ आइसोलेसनमा अक्सिजन पनि प्रदेश अस्पतालकै भर छ। सुर्खेतकै सिम्ता गाउँपालिकाले बजेडीचौर स्वास्थ्यचौकीमा
गौरादहका थप एक संक्रमितको मृत्यु
झापाको गौरादह ४ का एक कोरोना संक्रमितको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । ६८ बर्षिय ती पुरुषको दमकको एडभान्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज बिहान निधन भएको हो । पूर्व जनप्रतिनिधी समेत रहेका उनलाई कोरोना परिक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको अस्पतालका शहदेव भट्टराईले जानकारी दिए । उनको आज बिहान ८ बजेर १० मिनेटमा मृत्यु भएको हो ।
आज बिहान पानी सहित परेको चट्याङमा परी मोरङको छुट्टा छुट्टै स्थानमा १ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ जना घाईते भएका छन् । आज बिहान पौने ९ बजे रंगेली नगरपालिका १ हाटखोला का ३० बर्षीय प्रबिन माझीको चट्याङमा परी मृत्यु भएको छ । उनि बारीमा काम गरिरहेको अवस्थामा चट्याङ्ममा परी गम्भिर घाईते भएका उनको रंगेली
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका मेयर ओमबहादुर बुढाको निधन भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण उनको निधन भएको हो। हाल देशमा दैनिक ५० भन्दा धेरैको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्य भइरहेको तथ्यांक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिइरहेको छ। बुढाको काठमाडौंस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। -डीसी नेपाल बाट